RASMI: Xulka Ingiriiska Oo Shaaciyay Xilliga Lagu Dhawaaqayo Liiska Xiddigaha Uga Qeybgalaya Tartanka Qaramada Yurub – Garsoore Sports
RASMI: Xulka Ingiriiska…
RASMI: Xulka Ingiriiska Oo Shaaciyay Xilliga Lagu Dhawaaqayo Liiska Xiddigaha Uga Qeybgalaya Tartanka Qaramada Yurub
Xulka Kubbada-cagta ee Ingiriiska ee lagu naaneeso ‘Saddexda-libaax’ ayaa shaaca ka qaaday xilliga rasmiga ah ee la shaacinayo xiddiga xulkaasi uga qeybgalaya Tartanka Qaramada Yurub ee bisha Juun lagu wado inuu billaabmo.
Tababaraha qaranka Ingiriiska Gareth Southgate ayaa ku dhawaaqi doona kooxdiisa Saddexda-libaax 25ka bishan May, taasoo siinaysa labo todobaad oo dheeri ah si uu ula shaqeeyo xiddigaha uu doortay kahor billaabashada tartanka.
Tababaraha ayaa loo gacan galiyay awooda uu ku magacaabanayo 26ka cayaaryahan ee dookhiisa ah taasoo ka dhigan in ay hortaalo shaqo adag marka la eego xiddiga Ingiriiska ee tirada badan wacdarahana ka dhigaya masraxyadda kubbada-cagta.
Affar maalmood kaddib markii uu ku dhawaaqo, Tababare Southgate wuxuu qorsheynayaa inuu kooxdiisa u kaxeysto Middlesbrough si uu xoogaa tababar ah u siiyo, inkastoo haddii lasoo xusho ay xiddigaha Manchester City iyo Chelsea ee John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Raheem Sterling, Mason Mount, Ben Chilwell iyo Reece James ay waxyar soo yara habsaami doonaan. kaddib markii uu cayaaraan fiinaalka Champions League-ga, 29ka bishan May.
Arsenal Oo Ceyrineysa Xiddigo Uu Kamid Yahay Leno